गृहपृष्ठ » समाचार » किन हराए भाग्य न्यौपाने ?
पुर्बेली लबजमा क्यामेरामा बोलेर लाखौको मनमा बसेका सयौलाई सहयोग गरेका व्यक्ति हुन् युटुबर भाग्य न्यौपाने ।
मलेसियामा पुगेका भाग्यलाई नेपाल मै फर्किएर केहि गर्ने आट जाग्यो अनि मलेसियाबाटै शुरु गरे तात्तातो खबर डट कम ।
नेपाल आएपछि शुरुमा हास्यकलाकार किरण केसीको अन्तरबार्ता लिएर तात्तातो खबर युटुब च्यानलमा सार्बजनिक गरे । त्यो भिडियो निकै भाइरल भयो ।
युट्युबमा अन्तर्वार्ता लिएर उनि सेलिब्रेटी नै बनेका छन । निरन्तर कर्म गर्दै गएका भाग्य न्यौपानेको भाग्य भने युट्युबले नै चम्काइदियो।
समस्यामा परेका तर हाइलाइटमा नपरेका समाचारलाई फरक ढंगले प्रस्तुत गर्ने भाग्यले युट्यबकै लागि भनेर रातदिन समय दिइरहे ।केही वर्षयता नाम र दाम दुवै भाग्य पछिल्लो समय समाजसेवामा पनि जोडिए । जसकारण भाग्यका फ्यान दिनानुदिन बढ्दै गए ।
झापा पुगेर उनले अहिलेका बालगायक अशोक दर्जीको अन्ततर्वार्ता लिएका थिए । त्यसपछि अशोक दर्जी पनि एकाएक चर्चामा आए । भाग्य न्यौपानेले ल्याएका धेरै भिडियो अन्तार्वार्ता चर्चित बने ।
भाग्यले अन्तर्वार्ता ल्याउन शुरु गर्दा यस्ता विषयवस्तु मिडियाको नजरमा पुग्दैनथे । ‘भुइँचालो जाँदा होस् या अरु बेला मैले त्यस्तै समाजमा पछि परेका कथालाई पात्र बनाए, कतिले त अन्तर्वार्ताकै कारण सहयोग पनि पाए ।अहिले त भाग्य न्यौपानेले जस्तो नयाँ पात्र र विषयको खोजी गरेर अन्तर्वार्ता लिने चलन नै बसेको छ ।
उनले कति बिरामीलाई भेटेर आफूले सहयोग गरेको र कतिको लागि सहयोग जुटाए । अहिले चर्चित बनेका अशोक दर्जीको अन्तर्वार्ता लिन उनी झापाका विभिन्न स्थानमा पुगेका थिए । निरन्तर रुपमा सक्रिय भएर समाजका प्रतिभाको खोजी गरिरहेका भाग्य न्यौपाने अहिले गुमनाम छन् ।
कोइ बिरामी परे होस् चाहे कोइ खान नपाए होस् उनि सहयोग लिएर पुग्थे ।कतै नया प्रतिभा भेटीए क्यामेरा लिएर पुगी हाल्थे ।तर केहि महिना यता भाग्य कहिँ कतै देखिएका छैनन् ।
उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जालहरुमा कुनै पोस्ट गरेका छैन् । युटुब च्यानलमा निरन्तर भिडियो पोस्ट गर्दै आएका भाग्य न्यौपानेले आफुले चलाउदै आएका ततातो खबर, भाग्य न्यौपाने युटुब च्यानलमा कुनै भिडियो पोस्ट गरेका छैनन् ।
उनको निगरानीमा चलाइएको भनिएको सोसियल न्युज नेपालमा भने समाचार वाचन गरेर निरन्तर भिडियोहरु आइरहेका थिए । त्यसमा समेत एक महिनादेखि कुनै भिडियो छैनन् । झण्डै साढे ५ लाख फलोअर्स रहेको फेसबुक अकाउण्टबाट समेत उनले कुनै पोष्ट नगरेको एक महिना भएको छ । उनी कतै पक्राउ त परेनन् भन्ने शंका छ ।
एमालेको विरोधबीच राष्ट्रियसभाले गर्यो बजेटसँग सम्बन्धित दुई विधेयक पारित
परराष्ट्रमन्त्री र भारतका–विदेशमन्त्रीबीच भेटवार्ता
बुद्ध एयरको जहाजले आकाशमा दुई घण्टासम्म फन्को किन मार्यो ?
चिउरा मिलमा भीषण आगलागी
तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान, यी प्रदेशहरुमा मेघ गर्जन/चट्याङ्गसहित वर्षा